Tonga ny Tails 5.0 mifototra amin'ny Debian 11, Gnome 3.38, fanavaozana ary maro hafa | Avy amin'ny Linux
Darkcrizt | 05/05/2022 21:23 | Fitsinjarana
Nambara ny famoahana ny Tails 5.0, dikan-teny izay misy andianà fanovana sy fanavaozana natao tamin'ny fototry ny rafitra.
Ho an'ireo izay tsy mahalala ny momba ny rambony dia tokony ho fantatr'izy ireo fa fizarana izany Izy io dia miorina amin'ny fototry ny fonosana Debian 10. y natao hanomezana fidirana an-tserasera amin'ny tamba-jotra, mba hitehirizana ny tsiambaratelo sy ny anarana miafin'ny mpampiasa amin'ny tamba-jotra.
Fivoahana tsy fantatra anarana avy amin'ny Tails no nomen'ny Tor Amin'ny fifandraisana rehetra, hatramin'ny fifamoivoizana amin'ny alàlan'ny tamba-jotra Tor dia voasakana tsy misy fangarony miaraka amin'ny sivana fonosana izy ireo, izay tsy mamela soritry ny tambajotra afa-tsy ny faniriany raha tsy izany. Ny Encryption dia ampiasaina hitehirizana ny angon-drakitra ho an'ny tahiry angon-drakitra ho an'ny mpampiasa eo anelanelan'ny fanombohana, ankoatry ny fanolorana andian-dahatsoratra efa voamboarina namboarina ho an'ny fiarovana sy ny tondrozotra ny mpampiasa, toy ny web browser, ny mail client, client instant message ankoatry ny hafa.
1 Fampisehoana vaovao lehibe an'ny Tails 5.0
2 Ampidino ny tail 5.0
2.1 Ahoana ny fanavaozana ny kinova Tails 5.0 vaovao?
Fampisehoana vaovao lehibe an'ny Tails 5.0
Amin'ity dikan-teny vaovao ity, izay aseho ho zava-baovao lehibe indrindra amin'ny fizarana, dia afaka mahita ny fiovana ao amin'ny System base amin'ny Debian 11 (Bullseye), raha nohavaozina ny ampahany amin'ny tontolon'ny mpampiasa gnome 3.38 (ny dikan-teny 3.30 teo aloha no nampiasaina). Nomena fahafahana mampiasa fomba fijery hidirana amin'ny fikandrana sy fampiharana.
Ny OpenPGP Applet sy Key Management Utility ary tenimiafina dia nosoloin'ny mpitantana ny taratasy fanamarinana Kleopatra novolavolain'ny tetikasa KDE.
Amin'ny alàlan'ny default, ny safidy hametraka ho azy rindrambaiko fanampiny nofidin'ny mpampiasa (rindrambaiko fanampiny) rehefa manomboka ny Tails dia alefa. Ny fonosana miaraka amin'ny programa fanampiny dia voatahiry ao amin'ny faritry ny fiara natao ho fitehirizana maharitra ny angon-drakitra mpampiasa (Persistent Storage).
Ny fiovana iray hafa miavaka dia izany afaka mampiasa ny topimaso momba ny hetsika ianao izao hidirana amin'ny varavarankely sy ny fampiharana. Raha te hiditra amin'ny topimaso momba ny hetsika ianao dia afaka:
Tsindrio ny bokotra Activities.
Alefaso ny fanondroan'ny totozy eo amin'ny zorony ambony havia.
Tsindrio ny super key
Ary miaraka amin'izany dia afaka mahita ny varavarankely sy ny fampiharana ao amin'ny topimaso. Azonao atao ihany koa ny manomboka manoratra mba hahitana ny fampiharana, ny rakitra ary ny lahatahiry.
Ny fiovana iray hafa misongadina dia ny fanohanana vaovao ho an'ny fanontana tsy misy mpamily sy ny scan amin'ny Linux dia manamora ny fahazoana mpanonta sy scanner vao haingana miasa ao amin'ny Tails.
Amin'ny lafiny iray, voalaza fa ny fanokafana ny boky VeraCrypt izay manana fehezan-teny lava be dia raikitra.
Momba ny fanavaozana rindrambaiko dia voalaza:
Tor Browser mankany amin'ny 11.0.11
GNOME avy amin'ny 3.30 ka hatramin'ny 3.38, miaraka amin'ny fanatsarana kely maro amin'ny birao, ny kojakoja GNOME fototra ary ny efijery hidin-trano.
MAT avy amin'ny 0.8 ka hatramin'ny 0.12, izay manampy fanohanana ny fanadiovana metadata amin'ny rakitra SVG, WAV, EPUB, PPM, ary Microsoft Office.
Fahasahiana manomboka amin'ny 2.2.2 ka hatramin'ny 2.4.2.
Disk Utility manomboka amin'ny 3.30 ka hatramin'ny 3.38.
GIMP avy amin'ny 2.10.8 ka hatramin'ny 2.10.22.
Inkscape 0.92 hatramin'ny 1.0.
LibreOffice 6.1 hatramin'ny 7.0.
Finalmente raha liana hahafantatra bebe kokoa momba izany ianao amin'ity kinova Tail vaovao ity dia azonao atao ny manamarina ny antsipiriany Ao amin'ity rohy manaraka ity.
Ampidino ny tail 5.0
Si te hanandrana na hametraka an'ity kinova Linux vaovao ity amin'ny solosainao ianao. Azonao atao ny mahazo ny sarin'ny rafitra izay efa misy amin'ny tranokala ofisialiny ao amin'ny fizarana fampidinana azy. rohy izany.
Ny sary azonao avy amin'ny fizarana fampidinana dia sary ISO 1.GB afaka mandeha amin'ny fomba mivantana.
Ahoana ny fanavaozana ny kinova Tails 5.0 vaovao?
Ho an'ireo mpampiasa manana kinova Tails teo aloha napetraka ary te hanavao ity kinova vaovao ity, afaka manao direct manaraka ny toromarika ao amin'ity rohy ity.
Ho an'ity dia azon'izy ireo atao ny mampiasa ny fitaovana USB nampiasain'izy ireo hametrahana Tails, azon'izy ireo atao ny manatona ny fampahalalana hitondrana an'ity hetsika ity amin'ny solosain'izy ireo. Ao amin'ity rohy manaraka ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fitsinjarana » Tonga ny Tails 5.0 mifototra amin'ny Debian 11, Gnome 3.38, fanavaozana ary maro hafa
Nandidy ny masoivohom-panjakana foibe sy ny orinasam-panjakana i Shina mba hamindra amin'ny Linux sy PC avy amin'ny mpanamboatra eo an-toerana